China Luxury Matte Black Filtered ịsa ahụ Head Manufacturer na Supplier | Xinpaez
Matte Black mechara -Aka aka gị ga-adị ịtụnanya. Matte ojii mechara mechaa gbanwee isi.
LAS-TUNNEL TECHNOLOGY- Nnukwu nrụgide na-eme ka nchekwa mmiri dị 30%.
Ugboro abụọ filtrations- Ihe nhicha diski nwere chaplet, edozi ihe: PP cotton, Carbon fiber, Vitamin C
Kpamkpam ahaziri Product. Akụrụngwa (ABS, PC) na agba nwere ike ahaziri
Mmiri nchekwa, ẹdụk
10 / 3.4 sentimita asatọ
Matte Black Aka aka gị ga-adị ịtụnanya. Matte ojii mechara mechaa gbanwee isi. Azu zuru oke nke zuru oke na-ekwe omume. Ha na-eme ya ka ị nwee ike ihicha ma kpuchie obere ịsa aka ojii na-enweghị mgbanwe ọdịdị ya. A na-ahazi ngwaahịa Xinpaez na-elekọta ihe niile a na-ahụ anya na-enweghị silicones, waxes na fillers, nke pụtara na ha agaghị agbakwunye gloss ma mebie ọdịdị matte. Ndị mmadụ na-achọ ịsị na ị ga-esi na-egbuke egbuke karịa nke na-egbuke egbuke, mana nke ahụ abụghị eziokwu! Matte paint abụghị ihe akaebe, doro anya, mana ọ ga-abụrịrị na ị gaghị enwe nsogbu na akara ịsa ahụ ma ọ dịkarịa ala.
LASER-TUNNEL TECHNOLOGY na-ewepụta mmiri dị ịtụnanya nke nwere ike ịkụ sọks gị (ọ bụrụ naanị na ị yikwasị ha na mmiri), mana mmiri ahụ na-acha nro ma dịkwa mma! | Micro-Jets Perforated Micro-Jets na-agba ike tunnels na gbawara ụmụ irighiri mmiri nke ikuku ikuku na mmiri nwere ike dị egwu na ọsọ ọsọ na-enweta 30% mmiri nchekwa.
MALO NA-AK FZI MMAD WAT anapụta dị elu ọtụtụ-ogbo filtration mmiri maka ahụike, na-eto eto na-achọ anụ & ntutu.
Disk nzacha na-eme ka mmiri ịsa ahụ dị ọcha site na igbochi sedimenti na adịghị ọcha.
Aka nyo KWES CR. Ọ na - ejikọ KDF siri ike, Calcium Sulfite na Carbon na - arụ ọrụ iji wepu ndu, chlorine, pesticides na ọla dị arọ, gbochie nchara, lime na isi, mee ka mmiri dị nro ma melite nhazi PH.
AROMA VITAMIN C Enwere ike itinye nzacha mmiri dị ka nzacha njikwa, nke nwere vitamin C na-etinye uche iji kwalite ahụike na anụ ahụike.
Nke gara aga: High Pressure ịsa isi- Chrome plated
Osote: Ejiji Water Azọpụta Hand ịsa Head
kacha mma handheld ịsa isi
Handheld ịsa ahụ isi
ịsa ahụ maka mmiri siri ike
isi mmiri na chaplet